Signal wuxuu gaarayaa 50 milyan oo soo dejin mahadsanidiisa WhatsApp | Androidsis
Tan iyo usbuuc ka hor, goorma WhatsApp ayaa ku dhawaaqday shuruudaha cusub ee adeegga oo ka mid ah barnaamijkeeda fariimaha, inbadan ayaa ahaa kuwa adeegsada waxay doorteen adeegyo xariir ah oo ammaan ah iyo inaysan ku ciyaarin xogtayada, oo ah Signal iyo Telegram labadaba, codsiyada si weyn uga faa'iideystay.
Maalmo ka hor, Telegram waxay shaacisay inay gaadhay 500 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon, lagu gaaro 25 ka mid ah maalmo yar gudahood. Hadda waa Signal, barnaamijka ugu farriinta badan adduunka ee fariimaha iyo oo ay taageerayaan Edward Snowden iyo Elon Musk yaa gaaray tiro rikoor ah oo soo dejin ah.
Sidee ku bilaabatay vs sidee u socotaa? pic.twitter.com/ERiFpZUz6c
- Saxiix (@signalapp) January 14, 2021
Sida aan ku arki karno koontada Twitter ee Signal, codsigan fariinta ah waxaad kaliya garaacday 50 milyan oo downloads ah oo aad ku kaydiso Play Store oo keliya. Dhowr maalmood, Signal sidoo kale wuxuu ahaa barnaamijka ugu badan ee lagala soo baxo App Store, markaa wax la yaab leh ma noqon doonto inaad aragto sida codsigan farriinta ah u gaarayo 100 milyan oo soo degsasho ah maalmaha soo socda si wada jir ah labada madal.
Ku dhawaaqida isbeddelka shuruudaha adeegga WhatsApp (oo aan saameyn ku yeelan Yurub meesha WhatsApp waxay leedahay lugo aad u gaaban) waxay ku beegnayd Elon Musk's tweet wuxuu nagu booriyay inaan isticmaalno Calaamadda. Xaqiiqdii, bishii Janaayo 10 in ka badan 800.000 oo qof ayaa ku rakibay Calaamadda Android sida ay qabaan ragga ku sugan Apptopia.
Maxaa Signal na siiya
Signal ayaa na siisa Dhammaad illaa dhammaad wicitaan wicitaan, wicitaan fiidiyoow iyo fariin diris ah. Dhowr maalmood ka hor, wuxuu ballaariyey tirada kaqeybgalayaasha wicitaan fiidiyow ah 5 ilaa 8 wada-hadal. Ikhtiyaariyadaha habayn ee ay na siiso weli waa kuwo aasaasi ah, laakiin sida ay shirkaddu sheegtay, waxay ka shaqeyneysaa in lagu daro darbiyada iyo istiikarada si loo nooleeyo wada hadalka.
Inta badan lacagta ay heshay Signal si loogu ilaaliyo kaabayaasheeda waxay ka timaaddaa, si kadis ah, ka timid mid ka mid ah aasaasayaashii WhatsApp, kaasoo markii uu ka tagay shirkadda dhowr sano ka hor, ka qoomameeyay waxa dalabkii uu abuuray uu noqday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Signal wuxuu gaarayaa 50 milyan oo soo dejin mahadsanidiisa WhatsApp